Turkiya oo Maraykanka ku eedeysay afgambigii dhicisoobay – Kasmo Newspaper
Turkiya oo Maraykanka ku eedeysay afgambigii dhicisoobay
Updated - July 17, 2016 12:31 pm GMT
Xiisadda siyaasadeed ee ka abuurantay Ankara iyo Washington ayaa wali kacsan,ka dib eedihii Turkiya u soo jeedisay maamulka Madaxweyne Barack Obama kuna saabsanaa afgambigii dhicisoobay.
Xisbiga talada haya iyo hoggaankiisa ayaa ku eedeynaya wadaadka Fethullah Gulen (Sawirka Hoose) oo masaafuris ku jooga Maraykanka in uu yahay midka ka dambeeya abaabulka afgambiga,eedahaas oo wadaadku ku gacan sayray,Xukummaduna waxaa ay rabtaa in loo soo gacan galiyo ama laga eryo dalka Maraykanka.
Wasiirka Shaqada Turkiya ayaa si caddaan ah farta ugu fiiqay in Maraykanku ka dambeeyeen afgambiga,Xoghayaha Arrimaha Dibadda Maraykanka John Kerry ayaa isaguna ka digay in an lagula soo galgalan eedo haddii an loo hayn daliil cad.
Dalka oo idil waxaa ka soconaysa feejignaan lagu difaacayo dimuqraadiyadda,madaxwene Erdogan ayaana ka codsaday dadweynaha in ay difaacdaan dimuqraadiyaddooda.
Dhanka kale waxaa socota xisaabtanka afgambiga iyada oo ilaa hadda la xiray 6,000 lana sheegay in ay jiri doonaan xarigga 6,000 oo kale.
Wasiirka Caddaaladda Bekir Bozdag ayaa sheegay in sii socon doonto waxa uu ugu yeeray “Nadiifinta Hay’adaha Dowladda”,iyada oo dadka la xiray oo uu ku jiro Garsoore ka tirsan Maxkamadda dastuuriga ay garab socoto tiro badan, 2,700 oo Garsoorayaal iyo Garyaqaanno shaqooyinkii laga xayuubiyay.
Dhanka ciidammada waxaa jira xarigga 34 Jeneraal oo kuwa ugu waweyn yihiin S/Guud Erdal Ozturk,Taliyihii Ciidanka 3aad ,kan ugu ballaran dalka, ee Xaruntiisu tahay Erzinkan, iyo S/Guud Aden Huditi,Taliyihii Ciidanka 2aad ee Malatya.
Saaka waabarigii waxaa la soo xiray Jen. Ozhan Ozbakir,Talyihii Saldhigga Denizli ee Galbeedka dalka iyo 51 askari. Sarkaal Sare oo kale,Jen. Duuliye Bekir Ercan Van oo ka tirsanaa Saldhigga diyaaradaha Incirlik iyo saraakiil lala xiray ayaa boliisku su’aalo weydiiyeen.
Saldhiggaas oo hawlihiisii shalay la joojiyay waxaa laga hagi jiray hawlgallada Isbahaysiga Carabta Maraykanku hoggaamiyo ee dagaalka Suuriya.